Badankood waxay iigu yeeraan Doug, maanta waxay ahayd Aabe | Martech Zone
Badankood waxay iigu yeeraan Doug, maanta waxay ahayd Aabe
Monday, June 18, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Daacadnimo dhan, ma aanan qorsheyneynin waqtiga qormadaan. Waa wax iska soo degay, in kastoo, waa inaan dhammaantiin idinla wadaago.
Fred wuxuu helay koox fara badan oo dad ah oo kacsan goor dhaweyd markii uu weydiiyay da'da iyo saameynta ay ku leedahay tayada ganacsiga. Oo ay ku jiraan dib-u-dhaca ayaa ahaa Dave Winer, Scott Karp, Steven Hodson, iyo koox kale oo badan kuwaasoo uga hadashay.
Ma hayn wax badan oo aan ka idhaahdo mawduuca markaa si fudud ayaan uga faallooday. Waan ku faraxsanahay goob shaqo oo kala duwan oo ay dhalinyaro iyo khibradba joogaan. Dadka da'da yar waxay u muuqdaan inay fiiro gaar ah u yeeshaan xuduudaha sidaa darteed muuqaalkooda cusub iyo cabsida la'aantu waxay si fiican isugu dhiibaysaa inay qatar galaan oo ay la yimaadaan xalal aad u wanaagsan. Si la yaab leh, waxaan jecelahay inaan naftayda ka fikiro sidii da 'yar 39 jir ah oo badanaaba aan u hadlo oo aan raadsado waxyaabo kale oo waaweyn oo caadiga ah. Khibrad, dhanka kale, waxay u egtahay inay isku dheellitirto halista iyo natiijooyinka - marar badanna ka hortagga musiibada.
Maamule Badeecad ahaan, halista aan soo bandhigo kuma koobna oo keliya shirkaddayda. Khatarta aan u maleynayo in loo gudbiyey macaamiisha 6,000 ee adeegsada softiweerka iyo wixii ka dambeeya shirkadooda. Taasi waa biyaano culus oo culus oo ka laalaada saqafka, markaa waxaan rabaa inaan hubiyo in xargaha ay sugan yihiin oo guntimaha ay wada xiran yihiin ka hor intaanan go'aansan inaan u dhaqaaqno meeshii.
Maanta way ka duwanayd sidii hore. Markii aan maanta soohdimaha qaar ka dhigay kheyraadka iyo mashruuc, waxaan la kulmay qof si jees jees ah u leh, "Waayahay, Aabe!". In kasta oo loola jeeday in la caayo, haddana dhab ahaan waan uga fogeeyay si deggan. Haddii uu jiro shay kaliya oo aan aad ugu faraxsanahay noloshayda, waxay noqotay Aabe weyn.
Waxaan hayaa laba caruur ah oo faraxsan, haku dhicin dhibaato .. with mid lagu aqbalay kuleejka deeqda waxbarasho iyo tan kale ee dhowaan ku guuleysatay "Abaalmarinta Ghandi" ee dugsigeeda. Labaduba waxay karti u leeyihiin muusig ahaan - mid heesaya, curinaya, iyo iskuxirka muusigga… midka kalena atariisho iyo heesaa cajiib ah.
Marka, saaxiibkeyga yar ee shaqada ila wadaagaya waxay ahayd inuu la yimaado wax ka duwan "Aabbe". Waxaan jeclahay ereyga "Aabe". Haddii aan u dhawaajiyo sida "Aabbe", waxay u badan tahay inay ahayd inaan la tacaalayo xaalad u muuqata inay ahayd edbinta cunug. Si macquul ah ayaa igu filan, marar dhif ah ayaan la kulmaa xaaladahan caruurtayda.
Da'da iyo Shaqada
Tani miyey badalaysaa ra'yigayga ku saabsan da'da, ganacsiga, iyo ganacsiga? Xaqiiqdii maya. Weli waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay cabsi la’aanta dhalinyarada si aan u riixno xadka waxa aan ku guuleysan karno. Aniga do aaminsan yihiin in xirfadlayaal badani ay yara dulqaadan karaan da'da oo ay u janjeeraan dhanka xuduudaha la dejiyey. Waan jeclahay diidmada, inkasta oo aan wali aaminsanahay ixtiraamka, masuuliyada, iyo xuduudaha.
Casharrada aan barto carruurteyda ayaa ah inaan soo maray meeshii ay horay u joogeen, khaladaad ayaan sameeyay, waxaana rajeynayaa inaan u gudbiyo xikmadda aan soo bartay. Taasi macnaheedu maahan inay tahay inay raacaan raadadayda, in kastoo. Waan jeclahay xaqiiqda ah in gabadhaydu masraxa saaran tahay markay igu qaadatay sannado inaan helo kalsoonidaas. Waan jeclahay xaqiiqda ah in wiilkeygu u anbabaxayo Kulliyadda markii aan ujeedo la’aan u aaday inaan ku biiro Ciidanka Badda. Maalin kasta way ila yaabaan! Qeyb ka mid ah waa sababta oo ah waxay aqoonsadaan xuduudaha, way ixtiraamaan, waxayna ogyihiin inay leeyihiin xorriyad ay ku sameeyaan waxa ay jeclaan lahaayeen (illaa inta aysan iyaga ama qof kale wax u dhimayn).
Waxaan rajaynayaa "ilmahayga" shaqada inay baran karaan isla wax la mid ah! Shaki iigama jiro inuu awood u yeelan doono inuu shirkadda ka yaabsado oo uu saameyn weyn yeesho, laakiin marka hore waxyaabaha ugu horeeya… aqoonsada oo ixtiraam khibradda halkaas ka jirta isla markaana fahmo xuduudaha. Ka dib markii aad taas sameysay, ka yaabso qof walba adoo ku dhajinaya waddo cusub jihada qofna weligiis uusan ka fikirin. Waan kaa caawin doonaa inaad halkaas gaarto! Ka dib oo dhan, waa maxay "Aabe"?
PS: Sannadka dambe, waxaan jeclaan lahaa kaarka Maalinta Aabbaha… iyo laga yaabee inay isku xirmaan.
Weli waan sii qori karaa Wargeyska haddii…
Dhab ahaantii ma tahay "Bulsho" Warbaahinta?
Jun 30, 2007 saacadu markay ahayd 8:18 AM
Waxaad u egtahay nin garanaya sida loo rogo feeraha. Aniga oo madax ka ah waax, waxaan ogaaday in dadka ila shaqeeya ay qiimeeyaan sifooyinkaaga. By habka, hambalyo carruurtaada guulaha ay gaareen.